काँकरभिट्टामा के छैन, सब थोक छ !- विचार - कान्तिपुर समाचार
काँकरभिट्टामा त्यस्ता सरकारी/सार्वजनिक अड्डाहरू छैनन् जहाँ कमला राजवंशीहरूले परिचयपत्र देखाएको भरमा सहुलियतमा रासन पाउन सकून् । रासन लिन चाहिने परिचयपत्रमा छालाको रङ, भाषा वा वर्गका आधारमा कसैले झेल नगरोस् ।
आश्विन ८, २०७८ उज्ज्वल प्रसाई
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको पहलमा बर्मा र असमबाट फर्केका ‘प्रवासी नेपाली’ लाई जग्गा दिएर बसोबास गराएको भेगलाई बर्मेली टोल र आसामे बस्ती भनिन्छ । नेपालका अन्य सहरमा झैं काँकरभिट्टामा पनि बर्मेली र आसामे टोल छन् । काँकरभिट्टाको बर्मेली टोलमा कोठा भाडामा लिएर बस्थिन् पैंतीस वर्षीया कमला राजवंशी ।
श्रीमान् र तीन सन्तान पनि उनीसँगै बस्थे । श्रीमान् यातायात मजदुर थिए । एक जनाको कमाइले पुगेन; गुजारा चलाउन कमला कहिले ज्यामी हुन्थिन्, कहिले भाँडा माझ्ने र लुगा धुने ‘दिदी’ । प्रत्येक हिउँदमा डेरानजिकै चौबाटोमा बसेर भक्का पकाएर बेच्थिन् । फरासिली थिइन्, बात मार्दै भक्का खुवाउँथिन् । चिल्ला सेता भक्का टमाटरको चटनीसँग स्वाद मानेर बर्मेली टोलका आसामे, दार्जिलिङे, मणिपुरे, भोटाङे, पान्थरे, इलामे अनेकले स्वाद मानेर खान्थे ।
कोभिड महामारीले यातायात मजदुरको काम ठप्प भयो, भक्का हिउँदबाहेक अरू बेला बिक्दैन । विकल्पको खोजीमा रहेकी कमला सामान वारपार गर्न थालिन् । प्रहरी र भन्सार छलेर सामान खोला तार्ने काम गरेबापत थोरैतिनो कमाउँथिन्, जेनतेन परिवार धानिन्थ्यो । महामारी अझै सकिएको छैन, आम नागरिकको जीवन सामान्य बनेको छैन । गुमेका रोजगारीहरू फिर्ता भइसकेका छैनन् । कमलाको धपेडी औधी बढ्यो । परिवारको खर्च उकालो लागेकाले होला, उनी बढी नै खट्न थालेकी थिइन् । दिनको तीन–चार पटक सामान ओसारपसार गर्दै थिइन् । चर्को घाम, जून नउदाएको अन्धमुष्टि रात, आरीघोप्टे झरी केही नभनी उनी वारिपारि गरिरहेकी थिइन् । एक किलो सुपारी मेचीपारि पुर्‍याएबापत भारु ३० कमाउँथिन् । एक पटकमा दस किलो पुर्‍याउन सके, नेरु ४८० हात लाग्थ्यो ।
गत असोज २ गते दिउँसो काँकरभिट्टामा ठूलो वर्षा भएको थिएन, मेची खोलाको बहाव सामान्य थियो । साँझ परेपछि कमलाले दुई पटक सुपारी बोकेर पारि पुर्‍याइन् । मेची पुलको माथिल्लो भागमा प्रहरी नभएको मौका छोपेर अन्तिम एक पटक सुपारी तार्न पाए, साबिकभन्दा बढी कमाउने आशा गरिन् । रातको एक बजिसकेको थियो । सम्भवतः पहाडी भेगमा दिउँसो वा साँझ ठूलो वर्षा भयो । साँझसम्म खासै ठूलो बहाव नभएको मेची खोला मध्यरातपछि बढ्न थाल्यो । आफ्ना दुई साथीहरूसँग दस किलो सुपारी बोकेर कमला खोलामा हेलिइन् । कसोकसो सुपारी जोगाउँदै दुई साथी खोला तरे, ह्वात्तै बढेको खोलाले कमलालाई चाहिँ भारीसहित हुत्त्याएर तल पुर्‍यायो । अरू दुईले किनाराबाट हेर्दाहेर्दै उनी बगेर कता हो कता पुगिन् । भोलिपल्ट बिहान भारतपट्टिको किनारामा उनको शव भेटियो ।
कमला बितेपछि रीत पुर्‍याएर दाहसंस्कार गर्न परिवारलाई हम्मे पर्‍यो । समाजसेवीहरू जुटे, खाद्यान्न र नगद सहयोग जुटाए, उनको अन्तिम संस्कार गरियो । कमलाले श्रम गरेर धानेको परिवारलाई अब गुजारा चलाउन कति गाह्रो होला ! एक जनाको सामान्य मजदुरीले परिवार चलाउन मुस्किल हुनेछ । सम्भवतः उनले गरिरहेको ‘काम’ अब श्रीमान्ले गर्नेछन् । वैधताको कानुनी परिभाषासँग मजदुरलाई खासै मतलब हुँदैन । अरूले ‘तस्करी’ भनेर के भो, कमलाहरूलाई यो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगरी नहुने श्रम हो ! उनीहरू श्रमिक हुन्, कामकै दौरान दुर्घटनामा परेर उनको मृत्यु भयो । के उनको मृत्यु पनि अवैध नै हो ?
कमलाहरू जहाँ श्रम गर्छन्, त्यो काँकरभिट्टाको नेपथ्य हो । रंगमञ्चको यथार्थ यति दुःखदायी छैन, बरु उपभोगको मेला लाग्छ त्यहाँ । मेची नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा पर्ने सीमानाकाको यो सानो बजार उपभोग मात्रको दृष्टिकोणले हेर्दा संसारका अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सहरहरूभन्दा धेरै भिन्न छैन । खाने, पिउने, लगाउने, गुडाउने — उपभोगका वस्तु र सेवामा कमी छैन यहाँ । कसैले प्रविधिलाई धन्य भन्छन्, कसैले अर्थतन्त्रलाईÙ जो धन्य भए पनि, ठूला ठाउँमा पाइने र यहाँ उपलब्ध वस्तु र सेवामा धेरै फरक छैन ।
प्रायः सडक कालोपत्रे छन् जहाँ प्रशस्त निजी गाडी कुदेका छन् । सामान्य र सस्ता बाइकका तुलनामा नयाँ मोडलका अत्याधुनिक बाइककै संख्या बढी छ । संसारमा चलेका सबैजसो ब्रान्डका मोटर यहाँ देख्न पाइन्छ । प्रत्येक दिनजसो भर्खरै सोरुमबाट निकालेका, नम्बर प्लेटसम्म जडान गरिनसकिएका नयाँ कारहरू गल्लीहरूमा देखिन्छन् । नेपालपट्टिको राजमार्ग त्यति ठूलो नभए पनि एसियन हाइवेको ६ लेनको सडक बसपार्कसम्म आइपुगेको छ । त्यही एसियन हाइवेअन्तर्गत बनेको यामानको पुलमुनिबाट त्यस रात कमला बगेकी थिइन् ।
दुई क्यासिनो सञ्चालनमा छन्, केही किलोमिटरपश्चिम एउटा पाँचतारे होटल चलेको छ, स्थानीय बासिन्दाकै लगानीमा अर्को तारे होटल बन्न थालेको छ । बजार क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘इन्टेरियर डिजाइन’ ले सज्जित तीन ‘कफी सप’ छन्, दुई सुविधासम्पन्न जिम क्लबहरू छन् । एउटा डिस्कोथेक निर्माणाधीन छ, बियर बार बन्ने क्रममा छ । काठमान्डुमा चोकैपिच्छे खुलेका ‘बिग मार्ट’ शैलीका ग्रोसरीहरूको संख्या यहाँ दिनहुँ बढिरहेको छ । ग्राहकले घुमीघुमी खरिद गर्न मिल्ने यस्ता पसलमा दुनियाँभर प्रचलित पेय पदार्थदेखि रंगीन प्लास्टिकमा बेरिएका झकिझकाउ खाद्यान्नसम्म सबै उपलब्ध छन् ।
सञ्चारका सबै सुविधा यहाँ चलेका छन् । इन्टरनेट चलाउने स्मार्ट फोनबारे कुनै टिप्पणी आवश्यक छैन । वर्ल्डलिंक र एनटीसीका साथै स्थानीय सेवाप्रदायक कम्पनी पनि सञ्चालनमा छन् । अनलाइन सामान खरिद गर्ने उपक्रम बढेको थाहा पाउन बाइकहरूमा ठूला बाकस दोकाँधे पारेर कुदिरहेका ‘डेलिभरी ब्वाई’ हरूको संख्या हेरे पुग्छ ।
फेसबुकमा नभएका मान्छेको खास गन्ती हुँदैन यहाँ । विवाह होस् वा पुराण, दलीय राजनीति होस् वा समाजसेवा, गाडी खरिद गरेको फुइँ लगाउन होस् वा नयाँ तरिकाले कपाल कटाएको खबर सुनाउन, अथवा टिकटकमा दर्जनौं हाउभाउ पस्कन, सञ्जालहरू भरिभराउ छन् । सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालमा यतिका सक्रिय मान्छे दुनियाँका अरू सहरमा कति भेटिएलान् ? कसैले अनुसन्धानको मेसो मिलाए रोचक तथ्यहरू फेला पर्दा हुन् ।
नेपालका नाम चलेका निजी बैंकका शाखा धमाधम खुलिरहेका छन् काँकरभिट्टामा । तीनतले आफ्नै भवनको माथिल्लो तलामा ‘कर्पोरेट अफिस’ बनाएको सहकारी संस्था छ जसले यस वर्ष मात्रै ३३ करोडभन्दा बढी नाफा गरेको छ । अर्बौं मौज्दात रहेको यस सहकारीले अन्यत्र दर्जनौं शाखा विस्तार गरेको छ भने दूध डेरी र अत्याधुनिक ग्रोसरी पनि सञ्चालन गर्न थालेको छ । उपभोगको मेला लगाएर बसेको काँकरभिट्टा नेपालका सहरहरूको प्रतिनिधि हो । अन्यत्रका कथा पनि लगभग उही होलान् । कवि भूपि शेरचनको भाका सापटी लिएर भन्दा— यहाँ के छैन, सब थोक छ !
यहाँ के छैन ? यस प्रश्नको साँचो उत्तर थाहा पाउन कमला राजवंशीलाई सोध्नुपर्थ्यो । कोही कमलाको विचार किन सुनोस् ! उनको मृत्युको समाचारसम्म गतिलो ढंगले लेखिएन, प्रहरीको खेस्रा रिपोर्ट सार्नुबाहेक स्थानीय अखबारहरूले उनी को हुन् भनी खासै खोजेनन् पनि । काँकरभिट्टामा के छैन भनेर सोधेको भए नेपाली भाषामा भाका मिलाएर उनले कति भन्न सक्थिन्, थाहा छैन । सुपारीका भारी बोकेर खोला तर्ने बाध्यता बेहोर्ने कमलाहरूलाई यस्ता प्रश्नमा घोत्लिएर समय बिताउने सुविधा नै कहाँ थियो होला र ! अलि गहिरिएर सोच्यो भने, उनका अपेक्षाको सामान्य अन्दाज भने गर्न सकिन्छ ।
यहाँ उनका सन्तानले सहुलियत वा सित्तैंमा गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँ छैन । त्यस्तो शिक्षालय जहाँ उनका छोराछोरीले जीवन र दुनियाँ बुझ्ने मौका पाऊन्, भाषाका सीप सिकून्, आफू को हौं भन्ने चिनून् र जिउने अदम्य उत्साह बोकेर घर फर्कून् । यहाँ त्यस्ता स्वास्थ्यकेन्द्रहरू छैनन् जहाँ उनी, उनका श्रीमान् वा छोराछोरी बिरामी परे पैसाको अतिरिक्त चिन्ता नगरी भरपर्दो उपचार गराउन पाऊन् । ती स्वास्थ्यकेन्द्रमा उनले राजवंशी लवजमा नेपाली बोल्दा कसैले नहेपोस् । नकाट्नुपर्ने आन्द्रा काटिएला भनेर भयभीत हुनु नपरोस् । केही घण्टाभित्र यति लाख जोहो गर्, नत्र ज्यान बचाउन गाह्रो हुन्छ भनेर कसैले नधम्क्याओस् ।
यहाँ त्यस्ता सरकारी/सार्वजनिक अड्डाहरू छैनन् जहाँ उनले परिचयपत्र देखाएको भरमा सहुलियतमा खानयोग्य आधारभूत रासन पाउन सकून् । अनि रासन लिन चाहिने परिचयपत्रमा छालाको रङ, भाषा वा वर्गका आधारमा कसैले झेल नगरोस् । चामल सकिएकामा, पीठो नभएकामा, तेल र भुटुन रित्तिएकामा अतिरिक्त चिन्ता गर्नु नपरोस् । सम्भवतः काँकरभिट्टामा उनले नपाएको त्यो करेसाबारी हो जहाँ दैनिक केही घण्टा श्रम गर्दा आफूलाई पुग्दो सागसब्जी उत्पादन हुन सकोस् ।
कमला राजवंशीहरूले काँकरभिट्टामा यी आधारभूत सुविधा पाउन कस्तो समृद्धि आउनुपर्छ ? अहिले क्यासिनो, डिस्कोथेक, बैंक, कर्पोरेट सहकारी र एसियन हाइवेसँगै आएको समृद्धिले किन पुगेन कमलाहरूलाई र उनीहरू दस किलो सुपारीसहित मेचीमा बग्नुपर्‍यो ? यसैबीच, देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको हिमायती हुँ भनेर दाबी गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले काँकरभिट्टालाई पनि झ्वाप्पै छोपेको छ । जुन चोकमा हेरे पनि कांग्रेसका उम्मेदवारहरू मणिपुरे गम्छा भिरेर भोट मागिरहेका देखिन्छन् । तर, यीमध्ये कुनै उम्मेदवारले यस्ता जरुरी प्रश्नमाथि एक मिनेट पनि आफ्नो ऊर्जा खर्च गरेका छैनन् ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:५०
पछिल्लो समय सर्वोच्चमा आमसरोकार र विवादको विषय नै नभएका वा पहिले नै प्रतिपादित नजिरबाटै टुंगो लागिसकेका विषयमा समेत प्रचलित संविधानको धारा १३३ लाई टेकेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक सरोकारको नाममा विभिन्न रिट दायर गर्ने प्रचलन छ ।
आश्विन ८, २०७८ वर्षा झा
सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दोहोर्‍याई पाऊँसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, २ हजार ९ सय ८९ पुनरावेदन, १ हजार ५ सय ५९ रिट, ८ सय २२ राजस्व र वाणिज्य तथा ३२ वटा संवैधानिक रिट छन् । ५ सय ६ निवेदन, ४ सय २२ प्रतिवेदन र ४ सय ४४ फुटकर निवेदन दर्ता छन् । एक वर्षमा २ सय ९४ मुद्दाको पुनरवलोकन तथा १ सय ७२ साधक दर्ता भएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ, रिट दर्ताको संख्या पनि अत्यधिक छ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १० नं. मा २०४३ सालमा भएको संशोधनमार्फत सार्वजनिक सरोकारको विवादको अवधारणालाई नेपालमा सर्वप्रथम आत्मसात् गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वप्रथम सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो, त्यसपछि नै यस्ता विषयका विवाद सर्वोच्चमा आउने क्रम सुरु भयो । यस मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्चमा आमसरोकार र विवादको विषय नै नभएका वा पहिले नै प्रतिपादित नजिरबाटै टुंगो लागिसकेका विषयमा समेत प्रचलित संविधानको धारा १३३ लाई टेकेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक सरोकारको नाममा विभिन्न रिट दायर गर्ने प्रचलन छ । यसले एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ, अर्कातर्फ आमसेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिक न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको छ ।
हुन त, सर्वोच्चले अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीविरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलसमेत रहेको मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालभरिका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित विवादको बोध हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र र विषय वस्तुसँग रिट दायरकर्ता व्यक्तिको सार्थक सम्बन्ध वा तात्त्विक सरोकार हुनैपर्छ । साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रूपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निजले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ ।’
तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चमा सस्तो लोकप्रियताका लागि दायर गरिने अनेक राजनीतिक तथा गैर–राजनीतिक रिटले गर्दा कोभिड महामारीबीच बाढी पहिरो छिचोल्दै दूरदराजबाट न्याय पाउने आसमा सर्वोच्च धाउने सेवाग्राहीको मुद्दाको पालो नआउनुका साथै मुद्दाको चाप पनि अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ । कुनै सञ्चारमाध्यमबाट नयाँ विषयवस्तु उठान हुनासाथ सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि रिट दायर गर्ने होडबाजीले गर्दा रिट दायरकर्तालाई व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत लाभ भए पनि न्यायको आम उपभोक्ता शीघ्र सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुने थालेका छन् । अर्कातर्फ सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका विवादमा जारी आदेशहरूको अभिलेख राख्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा हालसम्म केकति आदेशहरू जारी भए भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत पाइँदैन ।
सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले दायरका निम्ति आएका रिट सर्वसाधारणका हकहितलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने प्रकृति हो/होइन पहिचान दायर हुनुपूर्व नै गर्न सकिए मुद्दाको चाप घट्नुका साथै इजलासको समय बचत भई दूरदराजबाट आएका आमसेवाग्राहीले न्याय पाउने वातावरण बन्न सक्थ्यो । यसतर्फ सर्वोच्च प्रशासन गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:४८